China Fivarotana mafana sy varotra orinasa mpamokatra entana amidy | Weiti
1, loko 12 volomaso molotra
2, mahazaka-manohitra sy manoroka
3, novolavolaina tamina manam-pahaizana manokana miaraka amina paika manavao
4, hatsaran-tarehy ho an'ny vehivavy, hatsaran-tarehy vehivavy
Loko manga 12 loko
Amboara Nonstick maharitra maharitra
Fanosotra, hatsaran-tarehy vehivavy
Tsy misy sary famantarana, Ekeo ny marika manokana
Famolavolana logo sy fanatsarana maimaimpoana
Mahazaka-manohitra sy manoroka-manoroka, ny tasy molotra dia miaraka amina tongony misy rantsan-sponjy mifty, mahatonga ny fampiharana ho nofinofy malefaka sy tsy misy ezaka. Vita amin'ny loko pigment HD, ny molotra loko dia hiseho sahy am-pireharehana amin'ny fakan-tsary avo lenta mihitsy aza, hahatonga azy io ho an'ny olona miasa amin'ny asan'ny vlogging, na mpidoroka selfie.
Namboarina tamina manam-pahaizana manokana miaraka amina paikady manavao izay mampifangaro pigment tsy manamaina, fampiharana milamina ary volon'ondry tsy misy lanjany, ny lokomena dia mameno ny fosanao miaraka amina valiny mavitrika valiny mazava tsara izay tsy hikorontana, halazo na hihetsika mandritra ny adiny valo. Ankoatr'izay, manalefaka izy io ary manisy tombo-kase amin'ny hydration mba hitazonana ny halemem-panahy.
Ny matte-cream dia mamarana lippy misy ranoka miaraka amina endrika nokaravasina mampitafy ny molotrao amin'ny loko marevaka miaraka amin'ny iray amin'ireo mpangataka tendron'ny ondana. Fomban-kazo tsy miraikitra izay azo hanaovana irery na amin'ny lokomena tianao indrindra.
LIP GLOSS Colour SALE mafana
1. Famolavolana logo maimaim-poana: Raha nahazo ny sary famantarana anao ianao, dia andefaso aminay ny rakitra amin'ny endrika PDF na AI. Raha tsy manana ny sary famantarana ianao dia mba lazao anay ny hevitrao momba ilay logo. Ny ekipa mpamolavola anay dia hanampy anao hamolavola ny sary famantarana.
2. Loko namboarina: Manana loko isan-karazany amin'ny lipgloss amin'ny safidinao izahay. Mifandraisa aminay momba ny tabilao loko.
3. Tube molotra fitoeram-bolo vita amin'ny molotra: Ho an'ny endrik'ilay fantsona fitoeran-javatra dia manana tahiry vonona be izahay, ary azonao atao koa ny manamboatra ny sary manokana anao amin'ny fantsom-bozaka.
4. boaty fonosana fonosana molotra namboarina: Ny boaty fonosana lip gloss dia misy ihany koa ho an'ny logo tsy miankina.
Teo aloha: Ambongadiny Waterproof Custom Private Label Matte Lip Gloss Vendor
Manaraka: Volomaso sandoka andriamby tsy miankina amin'ny masom-bolo andriamby
Fanosotra amin'ny lokon'ny tarehy kosmetika
Mpamokatra molotra Gloss
Gloss Lip Lokon'ny tsy miankina
Ambongadiny tantera-drano tsy miankina Custom Label Matte ...
kapoka mink, lipgloss, eyeliner, Mpivarotra volomaso, Fanitarana volomaso, Volomaso maso,